Magaca Magaca leh | Ningbo Care Medical Instruments Co., Ltd.
MAXAA LAGU QAADAY
Fudud oo wax ku ool ah
Waxaan ahay Chandler, Aasaasihii sumadda KAMED. Waa sumadda aan ku faano. Markii aan booqday macaamiishayda dibadda, waxay had iyo jeer i weydiiyaan maxaa loogu magac daray KAMED? Ma leedahay macno gaar ah? Waxaan ugu jawaabay haa. Waa sheeko dheer oo waalidkey ila socota. Xilligaas xusuustaydu waxay tagtay waqtiyadaas…
Sannado 2003 — Maalintii qalin jabinta jaamacadda, SARS ayaa ka soo baxday ilaalinteeda. Shaqaalaha caafimaadka oo aan tiro lahayn ayaa si geesinimo leh uga dagaallamayey safka hore ee dagaalka lagula jiro SARS. Xitaa qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ayaa naftooda qaaliga ah ku waayey dagaalkan, annaga oo qarka u saarneyn inaan ka qalin jabino jaamacadda caafimaadka, waxaan ogaanay inaan leenahay masuuliyad weyn isla markaana aan sidoo kale dooneyno inaan isku dayno. Waxaan rajeynaynay inaan qalin jabino oo aan ku biirno kooxda dhakhaatiirta sida ugu dhakhsaha badan, waxaan udiyaarineynaa awoodeena si aan u badbaadinno bukaanno badan, iyo soo celinta nabada iyo xasilloonida adduunka. Si kastaba ha noqotee, aniga ahaan, marka laga soo tago welwelka la mid ah kuwa aan isla fasalka nahay, waxaa sidoo kale jira walwal badan oo ku saabsan qaraabadeyda.
Hooyaday iyo walaalkay waxay ku noolaayeen magaalada Guangzhou, oo ah aagga ay aadka u saamaysay ee SARS, noloshoodiina waxaa ku sigtay in jeermis la qaado waqti kasta. Hooyaday ayaan wicitaan ugu yeeri jiray maalin kasta. Markii wicitaankii la qabtay, qalbigeyga sudhan ayaa si lama filaan ah u nastay, oo u faraxsan sida ilmo hooyaday ku jira, oo aan dareemayo diirimaad iyo jacayl muddo dheer lumayay. Nasiib wanaagse, SARS waxaa xalliyay shaqaale caafimaad oo weyn markii aan qalin jabiyay. Dhamaanteen waan jecelnahay noloshan cusub ee sida adag loogu guuleystay. Tan iyo markaas, abuur ayaa lagu beeray qalbigayga: daryeel wanaagsan qoyskayga oo samee astaamo ii oggolaanaya inaan barto wax aan ka faa'iideysto dad badan.
Sannadkii 2005 —— Kadib laba sano oo tababar ah oo aan ka waday shirkad dawooyinka soo saarta, wax badan ayaan ka bartay daawada, oo ay ku jiraan agabka caafimaadka, aaladaha caafimaadka, cabbiraadda wax soo saarka, iyo hababka isticmaalka qalabka caafimaadka. Labada sano ee waayo-aragnimada shaqada ah ayaa iga dhigtay inaan ogaado sida loo rumeeyo riyadayda sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan oo aan u dabakho wixii aan bartay. Markaa, waan ka tegey shaqadaydii oo waxaan bilaabay safar ganacsi oo u gaar ah bishii Nofeembar ee sannadkaas. Waxaan aas aasay shirkad la yiraahdo CARE MEDICAL. Kama hagran doorashada magacan. Sababtoo ah waxaan ku dhawaaday qof aan jeclaa, oo ii suurta geliya inaan dhiso dareen adag iyo masuuliyad aan ku daryeelo qoyskeyga sidii hore. Waxaan rajeynayaa in shirkadaydu ay u faafin doonto aqoonsiga muhiimada iyo bedelka ehelkooda dhalinyaro badan. Hal ku-dhiggeenna xayeysiiska ah ayaa ah: Waxaad u qalantaa in si wanaagsan loo daryeelo…. Xaqiiqdii, qoyskaaga wuxuu u baahan yahay in si fiican loo daryeelo, adigana waxaad leedahay masuuliyad aan la dhaafi karin oo qoyskaaga ah.
Sanadka 2007 --- Hal maalin oo caadi ah, waxaa isoo wacay aabbahay. Wuxuu iiga sheekeeyay calooshiisa dhiig bax. Si dhakhso leh ayaan u dhigay wixii aan sameynayay waxaanan toos u geeyay isbitaalka. Nasiib darrose, aabbahay oo waayeel ah ayaa laga helay kansarka mindhicirka. Intii aabbahay cisbitaalka jiifay, wax walba gacanta ayaan iska dhigayay, maalin walbana waan la joogay. Markii aan arkay in waxyaabaha kala duwan ee aan iibiyey iyo qalabkii aan iibiyey loo korsaday meydka aabbahay, waxaan si lama filaan ah u gartay in aan masuul ka ahay qof kasta oo isticmaala alaabtayda. Bukaan kasta oo gala isbitaalka wuxuu rajo iyo mustaqbalba saaraa waxyaabahaan, gaar ahaan bukaanada qaba kansarka. Markii aan la sheekaystay qof kasta oo sariirta saaran, waxay ii sheegeen inay aaminsan yihiin sayniska iyo dhakhaatiirta. Waxay leeyihiin caqiido sidan u adag oo ay kula dagaallami karaan cudurka. Wada sheekaysiga noocan oo kale ah ayaa si qoto dheer u garaacay naftayda waxayna iga dhigtay waxaan aaminsanahay hal-ku-dheg u eg diiradda tayada mid run ah. Nasiib darrose, aabbahay weligiis wuu iga tegey daaweyn sannad ah ka dib. Si kastaba ha noqotee, waxaan bartay inay tahay inaan hoos ugu dhaadhacno dhulka si aan u gaarno kaamil ahaanta ugu sareysa ee shey kasta si aan ganacsi u sameyno, taas oo keeneysa rajo iyo qurux dad badan.
Shaqaalaha shirkadeena waxay had iyo jeer ku shaqeeyaan dareen xoog leh oo masuuliyad iyo masuuliyad bulsho ah. Sidaa darteed, geeddi-socodka adag ee hal-abuurnimada ee in ka badan toban sano, soo-saarkeenna soo-saarka iyo xulashada alaab-qeybiyaha ayaa soo maray lakabyo baaris ah. Marka la eego xakamaynta tayada, aaminaadkeenu waa: alaabooyinka aan buuxin heerarka lama bilaabi doono, iyo alaabooyinka aan buuxin heerarka laguma talinayo. Marka la eego wada-hawlgalayaasha iskaashiga, xulashadeennu waa: shirkadaha aan lahayn dareen daacadnimo iyo maarayn tayo leh iskaashi lama yeelan doonaan si looga hortago in badeecooyin badan oo qurmay ay u soo qulqulaan suuqa. Falsafadeena ganacsi ee shirkadeena ayaa ah inay soo saarto alaabo amaan u ah waxtarna u leh macaamiisha. Waxaan joojineynaa alaabooyinka ka soo horjeeda falsafada shirkadeena maxaa yeelay kaliya ma qancin karaan khibrada macaamiisha laakiin sidoo kale waxay dhaawici karaan qiimaha bulshada ee sumadeena. KAMED kaliya maahan astaan, laakiin waa aaminaad iyo qiimo tayo leh oo raacda kaamilnimo oo aan marnaba tanaasul lahayn.